Ngwọta formwork Ihe eji arụ ụlọ nke ọgbara ọhụrụ na -awụpụ bụ usoro ihe nlele nwa oge iji hụ na a wụsara ihe ahụ n'ime ihe siri ike dị ka ihe eji achọ ya. Ọ ga -ebu ibu kwụ na ve ...
Ngwọta Scaffolding Scaffolding na -ezo aka na nkwado dị iche iche arụnyere na ebe a na -ewu maka ndị ọrụ ka ha rụọ ọrụ ma dozie ụgbọ njem kwụ ọtọ na kwụ. Karịsịa maka ndị na -ewu ụlọ ka ha rụọ ọrụ elu na ala ma ọ bụ iji chekwaa elu ...
Ngwọta Formwork akpaaka akpaaka
Mpempe akwụkwọ na -arị elu akpaaka Oghere ịrị elu dabara adaba maka isi ụlọ ahụ karịa mita 45, a pụkwara itinye ya n'ọrụ na akụkụ dị iche iche. Ọ adopts ihe niile-ígwè Ọdịdị dị ka a dum, na integrated akụrụngwa, ala co ...
Ngwọta Ngwọta Nzuzo Nzuzo
Nchekwa ime ụlọ ịchekwa ihe mkpuchi ime ụlọ bụ akụkụ ngwaahịa ọhụrụ nke Sampmax Construction, n'ihi ahịrị ụlọ ọrụ mmepụta ihe na mmepe teknụzụ, na 2020 anyị guzobere ụlọ ọrụ ọhụrụ maka ụdị ngwọta a. The ikuku-mma unit bụ tupu ...